FAQs - Hangzhou Precision Machines Co., Ltd.
Misy ve ny vokatra namboarina?
Lazao aminay fotsiny ny fangatahanao, afaka manamboatra anao izahay ary mety hanatsara ny drafitrao.
Mandoa vola fanampiny ve aho amin'ny namboarina?
Miankina izany.Raha te hiova fotsiny ianao toa ny voltre, ny haben'ny probe, ny flange sns dia malalaka. Raha te hanova ny ampahany ifotony ianao, na manampy toera-panohanana, tsipika fivoriambe, sns, azontsika atao ny mifanakalo hevitra momba ny sarany mifanaraka amin'izany.
Mila manova ny tsipika fiasako ankehitriny ve aho rehefa mampiasa ny vokatrao?
Tsia, hifidy sy hamolavola ny vokatra izahay araka ny tsipika fiasanao ankehitriny.
Afaka mahazo santionany alohan'ny baiko ve aho?
Azo antoka, misy santionany misy karama. Azonao atao ihany koa ny manofa ny fitaovana ultrasonic haavon'ny laboratoara mba hizaha toetra ny kalitao sy ny vokany miasa. Raha mifanaraka amin'ny zavatra ilainao izany dia azonao atao ny mividy ny haavon'ny indostria amin'izay, ary ny saram-panofana dia azo ampiasaina ho fandoavana ny entana.
Rehefa avy nanafatra na nanofa santionany izahay, ahoana ny fanandramana no tena mitombina?
Alohan'ny hampiasanao ny fitaovana dia hangataka ny filanao sy ny valiny izahay.
Aorian'ny fampiasanao ny fitaovana dia hanome ny dingana fanandramana sy boky torolàlana momba ny fitaovana izahay.
Vantany vao vita ny andrana dia hanampy anao hamoaka ny firaketana angon-drakitra mifanaraka amin'izany izahay.
Orinasa orinasam-barotra ve ianao?
Ny orinasanay dia manana tantara efa ho 30 taona hatramin'ny nananganana azy. Manana mpiasa matihanina 100 eo ho eo sy mpiasa R&D maherin'ny 15 izy io. Any Hangzhou no misy azy, tongasoa tokoa izahay hitsidika sy hiresaka.
Payment & Delivery & Warranty?
T / T, L / C amin'ny fahitana, Western Union, PayPal, Visa, Master Card.
Ao anatin'ny andro fiasana 7 ho an'ny vokatra mahazatra, andro fiasana 20 ho an'ny iray namboarina.
Ny vokatra tsirairay afa-tsy ny fanjifana dia manana antoka 2 taona.
Manamboatra sy mivarotra fitaovana ultrasonic fotsiny ve ianao?
Izahay dia mpanamboatra manokana amin'ny famokarana fitaovana ultrasonic sy vahaolana indostrialy ho an'ny fitaovana ultrasonic. Tsy vitan'ny hoe manome fitaovana ultrasonic fotsiny isika, fa koa fitaovana hafa mifandraika amin'ny famokarana indostrialy. Ohatra, blender. Tavy fampifangaroana vy tsy misy fangarony, fitaovana fitsaboana rano, tanky fitiliana fitaratra, kojakoja elektronika sns.
Afaka ny ho mpaninjara anao ve aho?
Mazava ho azy fa tongasoa antsika tokoa. Mila mpivarotra mavitrika kokoa izahay hiaraka aminay hampiroborobo ny marika sy hanitatra hananana tsena bebe kokoa. Kalitao aloha.
Iza avy ireo mari-pankasitrahana anananao?
Ho an'ny orinasa, manana ISO izahay; Ho an'ny vokatra, manana CE isika. Ho an'ny fampiharana Production dia manana Patent nasionaly izahay.
Inona ny fandrosoanao?
Izahay no mpanamboatra fitaovana ultrasonic voalohany indrindra any Shina. Ny fitaovana fototra dia azo itokisana amin'ny kalitao sy matanjaka amin'ny R&D.
Alohan'ny baiko: ny varotra 10 taona sy ny injeniera 30 taona dia manome torohevitra matihanina momba ny vokatra, avelao ianao hahazo ny entana mety indrindra.
Mandritra ny filaharana: Miasa matihanina. Izay fandrosoana dia hampahafantatra anao.
Aorian'ny baiko: vanim-potoana fiantohana 2 taona, fanampiana ara-teknika mandritra ny androm-piainana.